Sida loo qaabeeyo badhankaaga toobiye MIUI | Androidsis
Qalabka mobilada ayaa kudarsanayay toobiyeyaashooda wakhti go'an si aad si dhakhso leh ugu fuliso mid ka mid ah xulashooyinkeeda badan. Waxay ku dhacdaa taleefannada oo dhan oo mid kasta oo ka mid ah soo saarayaasha ayaa go'aansada inay ku daraan tiradooda badhan kale, laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah waa la qaabeyn karaa.
Noocyadan toobiye ayaa loo isticmaali karaa in lagu furo kaameradda, la furo shaashadda kala-baxsan, laga qaado shaashadda ama iftiinka loo socodsiiyo, iyo qaybaha kale ee aan awoodi doonno U fududeynta nolosha waxay ku lug leedahay abuurista ugu yaraan kuwa maalin kasta la isticmaalo waana mid muhiim ah markasta oo aad rabto inaad hawl degdeg ah wadato.
MIUI waxay noo ogolaaneysaa inaan ku hagaajino badhanka badhankayaga dhowr talaaboMidda togan ayaa ah inaan ku qaban karno dhowr waxyaabood. Lakabka caadada ah ee Xiaomi iyo Redmi ayaa wanaajinaayay waqtigan ka dib faa iidada isticmaaleha ugu dambeeya ee isagu ah kan isticmaala.
Isku xirnaanshaha marinnadaas waxay ku xirnaan doontaa inaad rabto ficil taabasho fudud oo badhan ah muddo dheer ama laba ah, sida ku dhacda qabashada shaashadda. MIUI waxay noo oggolaan doontaa inaan doorto midka aan dhigeyno toobiye kasta si noloshu aad noogu fududaato.
Si aad ugu habayso badhankaaga gaarka ah ee 'MIUI' waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Hada marin u hel xulashada Dheeraadka ah
Dhagsii Tilmaamaha Button
Dhagsii ficilka aad rabto inaad u sameyso toobiye
Hadda waxaad galaysaa guddi leh toobiyeyaal bilaash ah waxaadna dooran doontaa mid aad rabto inaad ku adeegsato toobiyehaas, xusuusnow inaad mid walba ku rido tuulbooyinkan aad u isticmaali doontid had iyo jeer
MIUI waxay noo oggolaan doontaa inaan dhowr waddo marinno, Waa waxtar badan haddii aad rabto inaad bilowdo kamaradda ama aad u isticmaasho toosh xaalad aad u madow. Xiaomi / Redmi lakabka khaaska ah ayaa sidoo kale u oggolaanaya hoos u dhig shaashadda si aad ugu isticmaasho taleefanka hal gacan, kala saar khaanadda abka, iyo waxyaabo kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Sida loo qaabeeyo badhankaaga toobiye MIUI
10ka ugu sareeya moobiillada ugu waxqabadka fiican xilligan